Erayada muhimka ah iyo Qeexitaanada | Boston School Finder
Markaad baarayso dugsi, waxaad arki kartaa erayo badan oo lasoo gaabshay iyo farshaxan. Hoos waxaa kuqoran qaar kamid ah qeexitaano fudud oo kaa caawin kara sharaxaad erayadaan.
Meelaynta Dheeriga ah (AP): Koorsooyinka heer kuleej ee ay bixiyaan qaar kamid ah dugsiyada sare. Ardayda ayaa mara imtixaanka Meelayta Dheeriga ah dhamaadka saadka kadiba qaada kara buundooyinka kuleejka ee m adadaas.
Heerka Xaadirnimada: Boqolkiiba ardayda dugsiga soo xaadirta celcelis ahaan maalintii.
Heerka Maqnaanshaha Ba'an: Boqolkiiba ardayda dugsiga ka maqna ugu yaraan 15 maalmood ah hal sano gudahiisa.
Heerka Xaadiritaanka Kuleejka: Boqolkiiba ardayda dugsiga oo iska diiwaangeliyay koorsooyinka kuleejka ka dib markay ay ka qalin jabiyeen dugsiga sare.
Diyaargaroowga kuleejka: Manhajka ama barnaamij tacliineed ayaa si khaas ah loo qorsheeyey si loogu diyaariyo ardayda afar sano ama jaamacad.
DESE (Waaxda Waxbarashada Dugsiyada Hoose/dhexe iyo Sare):Waaxda Gobalka Massachusetts ee Waxbarashada Dugsiyada Hoose/dhexe iyo Sare ayaa masuul ka ah waxbarashada dawlada ee dugsiyada hoose/dhexe iyo sare ee gobalka Massachusetts oo dhan.
Isdiiwaangelinta labada dhinac: Barnaamijyada ama fasalada u oggolaanaya ardayda inay qaataan koorsooyin heer jaamacadeed ah oo loo xisaabin doona labadooda darajooyinka dugsiga sare iyo kuleejka.
Labo luuqadle: Barnaamijyada tacliinta ee lagu baro laba luuqadood. Mararka qaarkood waxaa loo yaqaan "waxbarashada laba-luqadlaha ah".
Danyarta: Ereyga maamulka gobolka Massachusetts wuxuu u isticmaalaa ardayda "dakhliga hoose". Waxaa ku jira dhammaan ardayda ka qaybqaata hal ama in ka badan barnaamijyada kaalmada gobolka.
Ingiriiska oo Loobarto Sida Luuqad labaad(ESL): Fasalada Ingiriisiga ee ardayda aan ahayn kuwa ku hadla afka hooyo.
Ardayda Barata Ingiriiska (ELL): Ardayga baranaya Ingiriisiga. Ardayda ELL waxay guud ahaan helayaan casharo gaar ah ama la hagaajiyey ilaa ay ka bartaan Ingiriisiga.
Wakhtiga la balaariyay ee Waxbarashada: Maalin dugsi oo dheer.
Waaya-aragnimada waxbaridda: Nooca waxbarashada ee ardaydu ay bartaan iyadoo loo marayo waayo-aragnimo badelki ay ku ekaan lahaayeen akhrinta ama maqalka ku saabsan mawduucyada dugsiga.
Heerka Qalinjabinta: Boqolkiiba ardayda ka socota dugsi sare oo ku qalin-jabiyay dugsiga 4 ama 5 sano.
Ka mid noqoshada: Habka waxbarashada gaarka ah ee ardayda baahida gaarka ah ay ku qaataan inta badan ama dhamaan wakhtigooda dugsigooda ardayda oo aan lahayn baahiyo gaar ah - dhammaan ardayda waxay si wadajir ah u dhigtaan fasalada.
International Baccalaureate: Barnaamij tacliimeed oo xoogga saara cilmi baarista iyo ardayda ka baranaysa asxaabtooda; badanaa waxaa loo maleeya in lagu horumariya xirfadaha fekerka ee muhiimka ah
Individualized Education Plan(IEP): Dhammaan ardayda hela adeegyada waxbarashada gaarka ah waxay leeyihiin mid ka mid ah kuwan. IEP waa sharaxaad qoran oo ku saabsan barnaamijka uu dugsigu u adeegsan doono si loo daboolo baahida shakhsi ee ardayga leh baahiyo waxbarasho oo gaar ah.
Learning Adaptive Behavior (LAB): Barnaamijka lagu caawinayo ardayda, gaar ahaan ardayda leh baahiyo gaar ah, dugsiga sare ama caadooyinka bulshada.
MCAS:"Massachusetts Comprehensive Assessment System." Mid ka mid ah labada imtixaan ee gobolka oo badankoodu ku qaataan Massachusetts ee fasalada 3-10, oo ay ku jiraan imtixaanada gaarka ah ee Xisaabta, English Language Arts (ELA), iyo Sayniska. Laga bilaabo bilawga 2016-2017, tan iyo imtixaanka PARCC waxaa loo sameeyay imtixaan loo yaqaan "Next Generation MCAS", oo ay ku jiraan su'aalaha labada imtixaan ee MCAS iyo imtixaanka PARCC.
SGP (Cabirka Qoleeyda ee Celceliska Kobaca Ardayda): Boqleeyda Kobaca Ardayda waxay muujinaysa horumarinta tacliinta ama kobaca ee ardayda dhigata dugsigaas muddo hal sano ah dhigaaysay marka la barbar dhigo ardayda kale ee la midka ah gobolka oo dhan. Celceliska SGP oo dhan 60 ama kabadan ayaa loo aqoonsadaa “kobac sare”; celceliska SGP oo dhan 40 ama kahooseeya ayaa loo aqoonsadaa “kobac hooseeya.”
National Association for the Education of Young Children (NAEYC, Ururka Qaran ee Waxbarashada Caruurta): Hay'ad caddaynaysa ama aqoonsanaysa barnaamijyada carruurnimada hore ee buuxinaysa heerarka waxbarashada, caafimaadka, iyo heerarka amniga. Barnaamij ah mid "aqoonsi kahaysta NAEYC" ayay ururkaani u aqoosadeen barnaamij tayo leh.
PARCC (Iskaashiga Qiimaynta U Diyaargarowga Kulleejada iyo Xirfadaha): Mid ka mid ah labada imtixaan ee gobolka ee badankoodu ka qaadatay Massachusetts laga soo bilaabo 2014 ilaa 2016, guud ahaan waxay qaataan ardayda fasalada 3-8. Waxaa ku jira imtixaanyo gaar ah ee Xisaabta, English Language Arts (ELA), iyo Sayniska. PARCC waxaa loo adeegsaday horumarinta nooca cusub ee MCAS, "Next Generation MCAS", oo bilaabay fasalada 3-8 sanadka 2017.
Dayactirka Caddaalada: Habka edbinta ee dugsiga. Caddaalada dib u soo celinta, ardayga ku xadgudbay xeer ama xeer ayaa la kulmi doona koox ka mid ah ardayda iyo macallimiinta si looga wada hadlo dhacdada iyo sida looga fogaado waxyeelada bulshada.
Sheltered English Immersion (SEI): Habka wax lagu baro ee ardayda baranaysa Ingiriisiga (ELLs) waxaa lagu baraa Ingiriisi ahaan macalimiin shahaado haysta, oo leh sharraxaad dheeri ah oo ku qoran luuqadooda hooyo marka loo baahdo si ay u sameeyaan waxyaabaha la fahmi karo. Fasal SEI ah, ardayda waxaa loo kala qeybiyaa afkooda hooyo - marka, tusaale ahaan, kuwa ku hadla afka Fitnaamiiska waxay ku dhex jiraan fasal kale oo ku hadla luqadda Fitnaamiiska.
SLIFE (Ardayda haysta Waxbarashada rasmiga ah ee xadidan ama gaabis ah): Ardayda Barata Ingiriiska (ELLs) iyo kuwa waxbarashadooda rasmiga ah la joojiyay. Dugsiyada qaarkood waxay bixiyaan fasalo gaar ah ama barnaamijyo si ay ugu adeegaan ardaydaas.
Waxbarashada Gaarka ah: Dhaqanka barashada ardayda leh baahida waxbarasho gaarka ah (sida naafonimada barashada ama horumarinta xirfadaha luuqadda) habka wax ka qabta baahidooda gaarka ah. Dhammaan ardayda hela adeegyada waxbarashada gaarka ah waxay leeyihiin Individualized Education Plan (IEP) (Qorshe Waxbarasho Shakhsiyeed) oo tilmaamaya adeegyada ay dugsigooda ku siin doonaan.
SPEDPAC (Golaha Waalidiinta ee Talobixinta Waxbarashada Gaarka ah): Sharciga gobalka Massachusetts ayaa kadoonaaya dhamaan dugsiyada dawlada inay lahaadaan Golaha Talobixinta Waalidka oo ufuran dhamaan waalidiinta ardayda naafada ah, iyo dhamaan dhinacyada kale ee xiisaynaaya golaha.
Heer Gobal: Sida DESE ukala saarto aqoonta tacliineed ee ardayda dhigta degmooyinka iyo dugsiyada gaarka ah ee kuyaala gobalka Massachusetts. Waxay kacaawisaa gobalku inuu go'aansho nooca taageero ee dugsiyadu ubaahyihiin iyo sida adeegyada loogu qoondeeynaayo. Heerka dugsiga ayaa diirada saara guusha tacliinta, hormarka kobaca, dhamaystirka dugsiga sare, googoynta aadka udaran iyo casharada heer kuleej. |Dugsiyada qaarkood waxaa macquul ah inaan lakala saarin sabab laxariirta “macluumaad qabyo ah”, Taasoo macnaheedu yahay in tirada ardayda imtaxaanka laga qaaday aysan kufilnayn in dugsiga lagu qiimeeyo. Dugsiyada iyo degmooyinka waxaa lookala saaraa shantaan qaybood ee soosocda, laga bilaabo heerka ugu sareeya (ugu fiica) ilaa kan ugu hooseeya:
Dugsiyada aqoonsiga: Kani waa heerka ugu sareeya ee tacliinta. Dugsiyada ama degmooyinka kujira qaybtaan uma baahna wax caawimaad ah ama gacan siin ah oo gobalka uga timaada waxaana lagu aqoonsanayaa guulahooda dhanka tacliinta. Dugsiga Aqoonsiga waxaa lagu aqoonsadaa guushooda sare, kobacooda sare, iyo kakormarida heerkii laga rabay.
Dugsi buuxiyay heerkii laga rabay: Dugsi ama degmo waxaa loo aqoonsadaa mid buuxshay heerkii laga rabay ardayda loomana aqoonsan inuu yahay dugsi herkiisu liito si guud dhinacyada dadaalka, dadalka koox docedka hooseeya, heerarka qali jabinta oo hooseeya, ama kaqaybgalka qiimaynta oo liita.
Dugsi qayb ahaan buuxiyay heerkii laga rabay: Dugsi ama degmo waxaa loo aqoonsadaa mid buuxshay qayb ahaan heerkii laga rabay haday buuxshaan heerkii laga rabay cadad yar oo kamid ah ardaydooda loomana aqoonsan inuu yahay dugsi herkiisu liito si guud dhinacyada dadaalka, dadaalka koox docedka hooseeya, heerarka qali jabinta oo hooseeya, ama kaqaybgalka qiimaynta oo liita.
Diirada lasaaray/taageerada yoolka: Dugsi ama degmo ayaa loo aqoonsadaa inuu ubaahan yahay diirad saarid/taageerada yoolka haduu dugsigu kujiro liiska 10 boqolkiiba dugsiyada ugu liita gobalka oo dhan, sida lagu cabiray boqleeyda hufnaanta; uu leeyahay hal ama kabadan oo kooxo doceedka ah kuwaasoo heerkoodu dhanyahay 5 boqolkiiba ama kahooseeyo; uu leeyahay heerka qalin jabinta oo liita dhamaan ardayda (uu kahooseeyo 66.7 boqolkiiba); iyo/ama uu leyahay kqaybgalka qiimaynta oo hooseeya (kahooseeyo 95 boqolkiiba) dhamaan ardayda ama hal ama kabadan oo kooxo doceedka ah hal maado ama kabadan.
Taageero wayn/balaaran: Kani waa heerka ugu liita. Dugsi ama degmo waxaa loo aqoonsadaa mid ubaahan taageero wayn/balaaran hadii loo aqoonsado mid waxbarashadiisu liidato ama uu si aad uliidata ukobcaaya uuna sidaas u aqoonsado Gudoomiyaha Waxbarashada Dugsiyada Hoose/Dhexe iyo Sare.
STEAM: (Sayniska, tiknoolajiyadda, injineernimada, Fanka, iyo Xisaabta): Dugsiyada qaarkood waxay bixiyaan casharro ama manhaj ayagoo diirada saaraya mawduucyadan. Si la mid ah STEM, laakin diirad dheeri ah saara Fanka.
STEM: (Sayniska, tiknoolojiyada, injineerinimada, iyo xisaabta): Dugsiyada qaarkood waxay bixiyaan casharro ama manhaj ayagoo diirada saaraya mowduucyadan.
Heerka Cadaadiska Ardayda: Boqolkiiba ardayda ka tagtay dugsi dhammaadka hal sano ilaa bilowga ee soo socdo.
Heerka Hakinta Ardayga: Boqolkiiba ardayda dhigata dugsi loo hakiyay sabab kasta hal sano gudahiisa
Saamiga Ardayga/Macalinka: Tirada Ardayda ku aadaysa hal macallin: Tirada ardayda la qiyaasay ee hal macallin. Tani maaha cabbirka fasalka - fasalada badankooda ee dugsiyada badankood waxay leeyihiin arday badan oo ka badan lambarkan.
Heerka Nagaashada Macalinka: Boqolkiiba macallimiinta dugsi ayaa ku sii nagaada isla booska hal sano ilaa tan xigta.
Gaar u ah Massachusetts
Charter School - Commonwealth: Kuwani waa dugsiyada inta badan lagu magacaabo"charter schools." Kuwani waa dugsiyada lacag la'aan ah oo fasax ka haysta maamulka gobolka Massachusetts oo ay la socodsiiyo dhaqaalaha dadweynaha laakiin aan ku xirnayn Boston Public Schools, waaxda dugsiga magaalada. Ogolaanshuhu waa bakhtiyaan nasiib furan.
Gaar u ah Boston Public Schools (BPS)
AWC (Casharada Shaqada Sare): Manhaj waxbarasho oo degdeg ah ama sareeya oo laga heli karo qaar ka mid ah dugsiyada BPS ee ardayda fasalada 4-6. Ardayda waxaa lagu aqbala fasalada AWC iyagoo lagu salaynaya dhibcooyinka imtixaanka loo yaqaan TerraNova (dhammaan ardayda waxay qaataan). Ardayda ku jirta AWC waxay wadaagaan fasalada.
Tier-ka BPS: Dugsiyada BPS waxay ku jiraan kaalinta 1 ilaa 4. 1 waa kan ugu sarreeya (ugu fiican) halka 4 uu yahay heerka ugu hooseeya. Tiers-ka BPS waxaa go'aaminaya natiijooyinka imtixaanka dugsiga, natiijooyinka sahanka dhaqanka dugsiga, iyo cabbiraadyo kale
Imtixaanka Dugsiyada Boston: Saddexda Dugsiyada Dadweynaha Boston - Boston Latin School, Boston Latin Academy, iyo John D. O'Bryant School - waa in aqbalitaanka ardayda ay ku saleysnaato shahaadooyinka tacliinta. Oggolaanshaha waxaa go'aamiya dhibcaha ardayga iyo waxqabadka imtixaanka la yiraahdo ISEE (Independent School Entrance Exam). Ardayda waxaa lagu aqbala fasalada 7 iyo 9.
Charter School-Horace Mann:: Dugsiyada degmada ee lacag la'aan ah oo ay kormeeraan Boston Public Schools, waaxda dugsiga ee magaalada, laakiin waxaa ay aqoosan tahay maamulka gobolka Massachusetts. Ogolaanshuhu waa bakhtiyaan nasiib furan.
EFA (Excellence for All): Barnaamij ka mid ah dugsiyada BPS ee fidiya helitaanka koorsooyin dheelitiran, sida caadiga ah laga bilaabo Advanced Work Classes (AWC). Ardayda ku jirta dugsiyada oo leh heer sare dhammaan waxay leeyihiin shaqo adag iyo fasalo sida STEM iyo luuqadaha adduunka.
Waqtiga Waxbarashada dheeriga ah (ELT): Wakhti kasta oo ka baxsan maalinta dugsiga caadiga ah ee loo isticmaalo in lagu balaariyo fursadaha waxbarasho tayo leh. Waxaa ka mid noqon kara maalin dugsi oo dheer, dugsi kadib, iyo / ama dugsi xagaaga.
Fasalada K0, K1, iyo K2: “kindergarten” iyo “pre-kindergarten” ayaa lagu dhigaa dugsiyada kuyaala Boston. Ardayda waxaa loo balan qaadayaa inay boos kahelaan dugsiga BPS ee K2 laakiin lama balan qaadaayo fasalada K0 ama K1 (boosaska fasaladaan waxaa lagu baxshaa hanaan bakhtiyaa nasiib ah). K2 waxaa caadiyan looyaqaanaa “kindergarten” ha;lka fasalada K0 iyo K1 labadaba loo yaqaano “pre-kindergarten” ama “Pre-K.”
K0 ayaa loodhigaa ardayda jiri doonta 3 sano marka lagaaro Sebteembar sanad dugsiyeedka cusub (ee sanadah 2019-2020, 3 sadex jirka ah marka lagaaro 9/1/19).
K1 waxaa loodhigaa ardayda jiri doona 4 sano bisha Sebteembar sanad dugsiyeedka cusub.
K2 waxaa loodhigaa ardayda jiri doona 5 sano bisha Sebteembar sanad dugsiyeedka cusub.
Qiimaynta Laxariirta Habdhaqanka Waxbarashada Gaarka ah (ABA): Waa qaab baaritaan oo loo adeegsado kobcinta ama badalida habdhaqano gaar ah. Waxaa adeeg ahaan loosiiyaa, inta badan ardayda qaba xanuunka dhakhraaryoowga (autism), sida ay kugo'aanshaan kooxda IEP du.
Adeegyada iskudhafan ee Waxabrashada Gaarka ah: Fasalo iskudhafa oo ardayda labaro - kuwaasoo kaladuwanaan karo da' ahaan/fasal ahaan
Waxbarashada gaarka ah (Naafada dhanka Caqliga ee yar/Dhexe/Daran): Waa adeegyo lagu taageeraayo ardayda awoodoodu xadiddan tahay wax yar, heer dhexe, ama aadka uxadidantahay si ay usameeyaan shaqooyinka fahanka ubaahan.
Waxbarashada Gaarka ah-Naafada Jirka: Adeegyada Curyaanimada NaafadaAdeegyada lagu taageerayo ardayda leh awoodda jireed xaddidan ee in ay socdaan ama ay sameeyaan fal.
Waxbarashada Gaarka ah-Qayb ahaan ah Gaar ah: Goobta fasalka ee ka baxsan goobta waxbarashada guud ee loogu talagalay carruurta leh baahiyo waxbarasho oo weyn.
Codsiga Dugsiyada Boston ee charter: Ardayga ayaa gali kara hanaanka bakhtiya nasiibka ee dhamaan Boston Charter Schools (marka laga reebo Bridge Boston) ayagoo adeegsanaaya hanaanka codsiga oonleenka ah.